ဘာသာရေးအဓိကရုန်းဖြစ်စေရန်ပြောဆိုနေသည့် ဦးသုစိတ္တကို အရေးယူပေးစေလိုကြောင်း နစ်နာသူများတောင်းဆို This Sit Khwe Monk Thu Seikta and Aung Zay Yatu editors should be arrested immediately. If anyone from the Military try to protect, they all should be arrested | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeဘာသာရေးအဓိကရုန်းဖြစ်စေရန်ပြောဆိုနေသည့် ဦးသုစိတ္တကို အရေးယူပေးစေလိုကြောင်း နစ်နာသူများတောင်းဆို This Sit Khwe Monk Thu Seikta and Aung Zay Yatu editors should be arrested immediately. If anyone from the Military try to protect, they all should be arrested
ဘာသာရေးအဓိကရုန်းဖြစ်စေရန်ပြောဆိုနေသည့် ဦးသုစိတ္တကို အရေးယူပေးစေလိုကြောင်း နစ်နာသူများတောင်းဆို This Sit Khwe Monk Thu Seikta and Aung Zay Yatu editors should be arrested immediately. If anyone from the Military try to protect, they all should be arrested
January 27, 2017 January 27, 2017 drkokogyi
This Sit Khwe Monk Thu Seikta and Aung Zay Yatu editors should be arrested immediately. If anyone from the Military try to protect, they all should be arrested.
ဘာသာရေးအဓိကရုန်းဖြစ်စေရန်ပြောဆိုနေသည့် ဦးသုစိတ္တကို အရေးယူပေးစေလိုကြောင်း နစ်နာသူများတောင်းဆို
ဟိန်းအောင် Myanmar Muslim Media ဇန်န၀ါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၇
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားသည့် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်အားစော်ကားပြောဆုိုနေသည့် ဘာသာရေးအစွန်းရောက်ဘုန်းကြီး ဦးသုစိတ္တကို ဥပဒေအရထိရောက်စွာအရေးယူပေးရန် အစ္စလာမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များက တောင်းဆိုနေသည်။
Nay Myo Thu သက်သေအထောက်အထားလဲခိုင်လုံတယ်တိုင်တဲ့သူလည်းရှိတယ်ဆိုရင်အစိုးရမှာရေးယူရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်။အရေးမယူရင်အလိုတူအလိုပါပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထုိုင်လိုပါက ကုရ်အာန်ကျမ်းပါ မငြိမ်းချမ်းသည့်သင်ကြားချက်များကို စိစစ်ပိုင်းဖြတ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ဘာသာရေးအစွန်းရောက် ဘုန်းကြီး ဦးသုစိတ္တက မိန့်ကြားလိုက်ကြောင်း အောင်ဇေယျတုဂျာနယ်တွင်ဖေါ်ပြထားပြီးနောက်အထက်ပါတောင်းဆိုချက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
“သူတို့ပြောသလို ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထုိုင်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်၊ အဲဒီကုရ်အာန်မှာ မငြိမ်းချမ်းတဲ့သင်ကြားချက်တွေရှိ တယ်ဆိုတဲ့ ထောက်ပြမှုတွေရှိလာခဲ့ရင်လည်း ဒီနေ့ဒီအချိန်အခါမှာ ဆန်းစစ်ပြီးတော့ စိစစ် ပိုင်းဖြတ်ဖို့လိုပြီလို့လည်း ဦးဇင်းကပြောချင်ပါတယ်”ဟု မဘသ ကဦးစီးထုတ်ဝေသည့် သာကီသွေးဂျာနယ် အမှတ် ၁၅၉ ပါ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ရပ်တွင် ဦးသုစိတ္တက အထက်ပါအတုိုင်းဖြေကြားခြင်းဖြစ်သည်။
ဟုလည်း မျိုးချစ်မြန်မာရဟန်းတော်များသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူး ဦးသုစိတ္တက သာကေတမြို့နယ်တွင်ကျင်းပမည့်တမန်တော်နေ့အခမ်းအနားကို နှောက်ယှက်ခဲ့သည့် ဇန်န၀ါရီ ၆ ရက်နေ့က New Lighter ခန်းမရှေ့တွင်ပြောဆုိုဖူးသည်။
အထက်ပါပြောကြားချက်သည် နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုပျက်ပြားစေရန် အတွက် လှုံ့ဆော်ပြောကြားနေခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း အစ္စလာမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးကသုံးသပ်သည်။
“ဒါမျိုးတွေလုိုက်ပြီးစော်ကားနေလုို့ရှိရင် ၁၉ ၃၀ ပြည့်ကုလားဗမာအထိကရုန်းက ဒီလို ဘာသာရေးအငြင်းပွားရာကနေစဖြစ်တာ ဒါ့ကြောင့် သူဟာ အဓိကရုန်းဖန်တီးနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက် အမြန်ဆုံးအရေးယူပေးပါ”ဟုခလီဖွှာ ဦးသိန်းဝင်းအောင်(KAFTG ဃာရာနာ)က Myanmar Muslim Media သို့ပြောသည်။
“မတူကွဲပြားမှုတွေကိုအင်အားသို့တည်းမဟုတ်အလှတရားအဖြစ်မခံယူတဲ့အပြင်ရန်လုိုတဲ့အပြုအမူတွေကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်နေသူတွေအပေါ်အာဏာစက်၊ဓမ္မစက်ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးတရားမျှတမှုကိုဖေါ်ဆောင်ပေးဖုို့တုိုက်တွန်းချင်တယ်”ဟုဝါရင့်နုိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်သူ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ဦးထွန်းကြည်က Myanmar Muslim Media သို့ပြောသည်။
မဘသ လုိုလားသူ မြန်မာမျိုးချစ်ရဟန်းတော်များသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူး သုစိတ္တ၏ အဆင့်အတန်းမဲ့စွာပြောကြားချက်မျိုး ကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ရန် အကြောင်းမရှိကြောင်း မမလအဖွဲ့ ဥက္ကဌကပြောသည်။
“အထွေအထူးပြန်ဖြေရှင်းနေမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီကိစ္စတွေကိုတော့ သက်ဆုိုင်ရာကို တင်ပြမယ်”ဟု မမလ အဖွဲ့ဥက္ကဌ ဦးမြင့်ထွန်းက ပြောသည်။
လူကုန်ကူးမှု၊ကျောင်းတိုက်လုမှု၊တမန်တော်နေ့အခမ်းအနားများကို ဦးဆောင်နှောက်ယှက်မှုတုို့ဖြင့် မျိုးချစ်မြန်မာရဟန်းတော်များသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူး ဦးသုစိတ္တကို ဗဟန်းမြို့နယ်သံဃာ့မဟာနာယက အဖွဲ့က ယခုလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ခေါ်ယူဆုံးမ(သြ၀ါဒခံခိုင်း)ခဲ့သည်။
တမန်တော်နေ့အခမ်းအနားများကိုနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးသူများအား ဥပဒေအရအရေးယူပါရန်လည်း မြန်မာမွတ်စလင်မ်အမျိုးသားရေးရာအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်ခင်က လည်းတမန်တော်နေ့အခမ်းအနားတစ်ရပ်တွင်ပြောကြားထားသည်။
Copy Link ;
← လ၀ကရုံးတွေမှာချိတ်ထားတဲ့ “မြေမျို၍ လူမျိုးမပြုတ်၊လူမျိုမှလူမျိုးပြုတ်မည်”ဆိုတဲ့ စာတမ်းတွေဖြုတ်ပစ်လိုက်စေချင်ပါတယ်
မျက်ရည်တွေ စို့ခဲ့ရတဲ့ “ချဉ်ဖတ်”လေး᠌᠌ →
5 thoughts on “ဘာသာရေးအဓိကရုန်းဖြစ်စေရန်ပြောဆိုနေသည့် ဦးသုစိတ္တကို အရေးယူပေးစေလိုကြောင်း နစ်နာသူများတောင်းဆို This Sit Khwe Monk Thu Seikta and Aung Zay Yatu editors should be arrested immediately. If anyone from the Military try to protect, they all should be arrested”
ဘာသာရေးအဓိကရုန်းဖြစ်စေရန်ပြောဆိုနေသည့် ဦးသုစိတ္တကို အရေးယူပေးစေလိုကြောင်း နစ်နာသူများတောင်းဆို This Sit Khwe Monk Thu Seikta and Aung Zay Yatu editors should be arrested immediately. If anyone from the Military try to protect them, they all should be arrested. Even IF Min Aung Hlaing or any General or any USDP leader dare to protect these CRIMINAL Ma Ba Thas…please openly warn them to stop. Educate the Myanmar people about the crimes of covering-up and protecting the criminals. Tell UN and the world to control the Myanmar Military and USDP leaders. If not DASSK led NLD would also be guilty of protecting these criminals.
A service member who is derelict has willfully refused to perform his duties (or followagiven order) or has incapacitated himself in suchaway that he cannot perform his duties. Such incapacitation includes the person falling asleep while on duty requiring wakefulness, his getting drunk or otherwise intoxicated and consequently being unable to perform his duties, shooting himself and thus being unable to perform any duty, or his vacating his post contrary to regulations. @ https://en.wikipedia.org/wiki/Dereliction_of_duty
An omission isafailure to act, which generally attracts different legal consequences from positive conduct. In the criminal law, an omission will constitute an actus reus and give rise to liability only when the law imposesaduty to act and the defendant is in breach of that duty. In tort law, similarly, liability will be imposed for an omission only exceptionally, when it can be established that the defendant was underaduty to act. @ https://en.wikipedia.org/wiki/Omission_(law)
James the brother of Jesus more exactly defines this sin when he states, “Whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin.” (James 4:17) @ https://en.wikipedia.org/wiki/Sin_of_omission
A duty to rescue isaconcept in tort law that arises inanumber of cases, describingacircumstance in whichaparty can be held liable for failing to come to the rescue of another party in peril. In common law systems, it is rarely formalized in statutes which would bring the penalty of law down upon those who fail to rescue. This does not necessarily obviateamoral duty to rescue: though law is binding and carries government-authorized sanctions, there are also separate ethical arguments foraduty to rescue that may prevail even where law does not punish failure to rescue. @ https://en.wikipedia.org/wiki/Duty_to_rescue